Published June 16, 2020 at 11:35 PM CDT
Saraakiisha caafimaadka ee Gobolka Buena Vista ayaa sheegaya in laba qof oo dheeri ah ay u dhinteen dhibaatooyin la xiriira fayraska wadarta sideed. Sababtoo ah shuruucda asturnaanta iyo dad yar, da 'iyo hiddeyaal lama sii deyn doono.
Hal bil ka hor, Buena Vista waxay aragtay 75 kiis. Maanta, waxay kor u dhaafeysaa 1,600. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray kaliya seddex xaaladood oo wanaagsan oo la soo sheegey maanta. Sababtoo ah dillaaca, Walmart ee Storm Lake waxaa loo xiri doonaa nadiifinta illaa subixii Khamiista.
Xaaladaha ayaa si aad ah hoos ugu dhacay aagga metrooga ee Sioux City toddobaadyadii la soo dhaafay. Waaxda Caafimaadka ee Degmada Dakota ayaa soo weriyey hal kiis oo la xaqiijiyay oo gaaraya 1,742. Degmada Dakota waxaa ku dhintay 32 qof.
Labada isbitaal ee Sioux City waxay diiwaan geliyeen tirada ugu hooseysa ee bukaannada COVID-19 tan iyo markii la siidaayay xogta horraantii Maajo.
Warmurtiyeed ay si wada jir ah u soo saareen, MercyOne Siouxland Medical Center iyo UnityPoint Health - St. Luke waxay ku sheegtey inay daryeelayaan 47 bukaan COVID-19.
Labada isbitaal ayaa dhawaan sheegay inay adeegeen ku dhawaad 400 bukaan oo COVID-19 ah oo ka kala yimid in kabadan 10 degmo oo kala ah Iowa, Nebraska iyo South Dakota.
Magaalada Sioux City waxay ku dhawaaqday hoolka magaalada iyo hoolka barbaradka / Xarunta dab damiska ayaa dib loo furi doonaa Isniinta 8-da subaxnimo. Kirooyinka Kirada guryaha loogu talagalay hoyga badbaadinta, Anderson Dance Pavilion iyo Cone Park Lodge ayaa la heli doonaa Jimcaha, Juun 26 iyadoo kayd ah oo keliya.
Iowa Gov. Kim Reynolds waxay xaqiijisay inay qorshaynayso inay saxeexdo amar fulineed oo si otomaatig ah ugu soo celin doona xuquuqda codbixinta dambiilayaasha la xukumay ka hor doorashada guud ee November.
Waxay maalintii la qaadatay Madaxweyne kuxigeenka Mike Pence waqooyiga Iowa. Pence wuxuu sidoo kale booqday horraantii Maajo inta lagu guda jiray dhererka masiibada COVID-19 ee Iowa.
Local NewsLocalIowaWoodbury CountyMike PenceNebraskaSouth DakotaIowa Governor Kim ReynoldsnewsMercyOneUnityPoint Health St. Luke'sCOVID-19SomaliBuena Vista CountyWalmart